V-Power Trading System - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
HomeV-Ike ahia ahiaV-Ike ahia ahia
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- V-Ike ahia ahia 1
Sistemụ V-Power Trading Free - Daybọchị Azụmaahịa Forbọchị Kasị Mma Maka Ndị Nweta Ego Forex
N'isiokwu a, anyị na-eweta ezigbo uru atụmatụ ahia ụbọchị eji ike V-Ike ahia ahia.
Onye kere na onye mmepụta nke usoro ihe a, Mike Semlitsch, na-akpọ ya “V-ike”, ma m na-akpọ ya “Ike ahụ”.
Usoro azụmahịa a nwetara aha ya site na njirimara “Ise” na “Λ” ihe nhazi nke na-eme na chaatị ebighi ebi.
The V-Ike ahia ahia bụ ọkara akpaka Forex Expert Advisor maka usoro nhazi Metatrader 4 (MT4).
Usoro ahia na-adabere n'echiche ezi uche, na-ejikọta ọtụtụ ihe na-eme ka ihe dị ike na-eme ka ha nwee otu nnukwu ọnụ na-eme ka ahịa dị elu.
"A ghaghị ime ka ihe niile dị mfe dịka o kwere omume, mana ọ bụghị mfe.”- Albert Einstein
a V-Ike ahia ahia na-arụ ọrụ na Forex na ahịa mmiri mmiri ndị ọzọ dị ka ngwaahịa, Ebube na Indices.
Rịba ama: Enwere ọkachamara ọkachamara ọkachamara dị iche iche iji nye ntinye ntinye maka atụmatụ aghụghọ a nke ọma!
The V-Ike ahia ahia ga-ewere ọtụtụ ihe ị ga-eji na-emepụta ihe na nsonaazụ dị egwu nke usoro ịzụ ahịa kwa ụbọchị.
a free version enweghi oke AUDJPY na EURCAD ego abụọ ma kachasị mma maka ịnwale nke a FX Expert Advisor.
Ntụle ihu na-esonụ na-egosi ihe atụ nke ndị a dị egwu akwa dị elu V-Ike EA ahia:
E nwere ihe karịrị puku ndị ahịa obi ụtọ na-eji EA n'efu. Oge nhazi a na-adọrọ mmasị dị oke mma.
Ọtụtụ ndị ahịa ihe dị mfe na-atụ n'anya nke atụmatụ ahia ahia ụbọchị yana ihe ngosi dị mma nke EA nyere.
Ọtụtụ n'ime ha gosipụtara na echiche a agbanweela ụzọ ha si azụ ahịa maka mma!
Sistemụ V-Power Trading Free - Usoro Bestbọchị Azụmaahịa Kacha Mma Maka Nnukwu Ndị Mmeri
N'eziokwu, ebe ọ bụ V-Ike ahia ahia na-arụ ọrụ n'oge niile, ọ nwere ike iji ya abụọ ụbọchị trading yana ogologo oge ịzụ ahịa azụmaahịa. Ọzọkwa, V-Ike ahia ahia na-arụ ọrụ n'ime ala niile ahịa ego mmiri dịka Forex, Commodities, Stocks and Indices.
The V-Ike ahia ahia na-arụ ọrụ AUDJPY na EURCAD naanị abụọ. Site n'iji nke a V-Ike EA ị ga-enweta:
Nnukwu ihe ahia
Mmetụta Ejiji Na-akpaghị Aka
Ihe Ndepụta Ngwaahịa Na-akpaghị Aka Ma Wepụ
a V-Ike ahia ahia na-arụ ọrụ n'ozuzu ụwa n'ihi na ọ na-eme ihe usoro a na-adịghị agwụ agwụ nke esi arụ ọrụ ego bara uru!
Ezigbo ego bụ n'ezie pony smart, na-eduzi ma na-emebi adịghị ike nke ụbụrụ uche na ụbụrụ ụmụ mmadụ, ugboro ugboro.
"Ọ bụrụ na ị maara onye iro ma mara onwe gị, ị gaghị atụ egwu ihe kpatara otu narị agha. Ọ bụrụ na ị maara onwe gị ma ọ bụghị onye iro, maka mmeri ọ bụla ị ga - enweta, ị ga - enwekwa mmeri. Ma ọ bụrụ na ị maghị onye iro ahụ ma ọ bụ onwe gị, ị ga-adaba n'ọgụ ọ bụla. " - Sun Tzu, Art nke agha
Ebe ọ bụ na ego ego na-arụ ọrụ mgbe niile, n'ụzọ ezi uche dị na ya mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe njedebe ma ọ bụrụ na ị ghọta ma jiri arụmọrụ a, mgbe niile. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịnwere ike inwe nkwanye ntụkwasị obi na-adịgide adịgide!
Otu uru nke V-Power bụ nke ahụ ị ga-enwe ike ịmepụta echiche a ọbụlagodi na ọrụ ụbọchị nkịtị!
Ntugharị nke akpaaka nke Usoro ahia ahia nke V-Power Day naanị mee ka o kwe gị omume.
Site na usoro V-Ike ị ga-enwe ike ịbanye n'egbughị oge na nnukwu ihe ịga nke ọma nke ịga nke ọma!
Sistem V-Power Trading Free - Onye Ọkachamara Ndụmọdụ Dị Mma Maka Ndị Ahịa Uru
Vidio na-esonụ na-egosi njirimara ọrụ nke ọkachamara ọkachamara ọkachamara.
Ị ga-ahụ ya nnukwu uru uru (13 + oge mbụ!) nke V-Ike EA.
Mana nke ahụ abụghị ihe niile, ịnwere ike ịkwalite arụmọrụ ahụ, wee nwekwuo mmeri na-emeri gị, ma ọ bụrụ na ị na-azụta usoro azụmaahịa gị site na ịgbakwunye na itinye echiche azụmaahịa dị mma na akara ngosi nke EA a na-enye n'efu.
Sistem Azụmaahịa V-Power Na-akwụghị ụgwọ - Etu ị ga-esi banye ahia azụmaahịa n’oge
Ịbanye ngwa ngwa n'ime ahịa ahịa dị elu na-akwụ ụgwọ!
Nyocha ngwa ngwa nke V-Ike ahia ahia ga-eduzi gị gaa ntinye aka dị elu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ahịa ahịa dị elu mgbe ahụ ịnweghị ike ịhọrọ V ọ bụla ma ọ bụ V-apụ ụkpụrụ na olileanya maka uru. Dị ka e kwuru na mbụ, nke a Onye Ndụmọdụ V-Power ọkachamara nwere ndị na-esonụ atụmatụ:
Achọpụta na-emeghị aka
Debe ihe ntinye akpaaka
Wepụ ihe mgbochi akpaaka
Anyị ga-ahụ otú ọkachamara ọkachamara enyere gị aka ịchọpụta ihe kachasị dị elu V-Power day trading setups!
a V-Ike EA na-agbakwụnye na-agbakwụnye ọdịdị dị mkpa na chaatị ahụ ma mee nyocha maka gị.
EA na-akpaghị aka na-agbakwụnye ahịrị eletrik na-agbatị na chaatị (njedebe nke ụbọchị ahia) na ya na-akpaghị aka na-agbakwụnye n'elu na ala maka gị.
Ọbụna dị mkpa karịa n'elu na ala, Onye Nlekọta Ndị ọkachamara na-agbakwụnye ihe nyocha ahụ maka gị!
Ị nwere ike ịnye ahịa jiri V-Ike EA aka ma ọ bụ ị nwere ike iji akpaaka ohere nke ọkachamara ọkachamara (ntinye akwụkwọ nrụpụta na ịzụ ahịa).
EA nwere ọrụ pụrụ iche iji mee ka ndụ gị dị ka onye ahịa azụ ahịa na-arụ ọrụ ụbọchị nkịtị. Ịbanye na V-Ike EA nwere ike ime ozugbo ma ọ bụ egbu oge.
Ndenye aha nd ị na-egbu oge dị mma maka ndị na-azụ ahịa nwere ọrụ ụbọchị nkịtị nke na-enweghị ike ịlele eserese n'ehihie!
Sistem Azụmaahịa V-Power n'efu - Kedu ka ị ga-esi welie uru gị
Ị nwere ike ịbawanye ụba na uru nke V-Power Day Trading System ma ọ bụrụ na ị họrọ naanị ndị setup nke na-eduzi na njedebe nke nnukwu foto!
Azụmahịa ndị a nwere ike ijide ogologo, ụbọchị maọbụ izu! Ha nwere ike ịmepụta ahịa ndị na-emeri nnukwu ego na-enwe mmeri dị mma!
Ọzọkwa, nchọpụta nyocha nke V-Power EA ga-arụ ọrụ ahụ siri ike maka gị: EA nyochaa ihe omume nke nnukwu foto!
na nke a V-Ike ahia ahia ị nwere ike ịbanye n'ụdị nnukwu oge. Ị nwere ike ịmepụta arụmọrụ n'ụzọ dị ịrịba ama site na iji EA a na ịzụ ahịa naanị na ntụziaka nke nnukwu njọ.
Ezi ihe adịghị mkpa mgbagwoju anya. Site na iji ọkachamara ọkachamara a, ọbụna ahia ụbọchị nwere ike ịbara gị uru!
Nweta akwụkwọ nke V-Power Trading System a
Ịzụ ahịa E wezụga Ọrụ Gị
Usoro ahia ahia nke V-Power Day
V-Ike EA Free
V-POWER TRADING SYSTEM - ỤBỌDỤ ỤBỌCHỊ ỤBỌCHỊ ỤBỌCHỊ KWESỊRỊ ỤBỌDỤ KWUKWU (13 + N'ỤLỌ MGBE!) Ezigbo enyi Forex ahịa, NEWS! V-Power Trading System - Atụmatụ ahia ahia nke kachasị mma maka ụbọchị ndị na-eme njem ihu igwe. Nweta ozi na bonuses ebe a: https://www.bestforexeas.com/free-v-power-trading-system/ N'isiokwu a, anyị na-ewetara anyị atụmatụ ahia ahia ụbọchị na-eji ikike Free V-Power Trading System arụ ọrụ. Onye kere na onye mmepụta nke usoro ihe a, Mike Semlitsch, na-akpọ ya "V-Ike", ma ana m akpọ ya "Ike Dị Ike". Usoro azụmahịa a nwetara aha ya site na njirimara "V" ma gbanwee ụkpụrụ "Nkọ" nke na-eme na chaatị ndị dị na mbụ.... GỤKWUO "
Vote Up3Vote Down zaghachi